Fianarana iray ref dia nanambara fa ny karazany tokana, Naso unicornis, dia saika tompon'andraikitra tamin'ny fanesorana Sargassum biomass. Ny fianarana faharoa ref Manaporofo ny fanarenana ny vatohara (fanesorana Sargassum) Voalohany indrindra noho ny vono olona, Platax pinnatus. Ny valin'ny fandalinana roa dia manambara ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ireo vondrona izay miorina amin'ny faharetan'ny tontolo iainana eo an-toerana. Ny paikady fitantanana sy fiarovana dia mety mila mijery mihoatra ny fahasamihafan'ny karazany ary mifantoka amin'ny fikojakojana ny fizotry ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ireo karazan-tsoratra fototra ao amin'ny vondrona.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHo any amin'ny toeram-piasana an-dranomasina sy ny fiveloman'olon-tokana azo itokisana: Torolàlana ho an'ny Mpitahiry Coral Corps Karaiba; Toko: Fitantanana ny harena an-kibon'ny tany, Korontana 6: Fitantanana ny fambolena karakarazo miaraka amin'ny faritra voaaro habaka
Fandinihana tranga - Fanaraha-maso ireo vondrom-piarahamonina haran-dranomasina ao amin'ny faritra fiarovana voalohany an'i Herbivore ao Hawai'i